Currants Selechenskaya: ukubuyekezwa. Blackcurrant Selechenskaya
Black currant - isiko ukuthi inika simnandi kakhulu futhi ewusizo izithelo efanayo, abashayeli bamaloli Russian ethandwa kakhulu. Izinhlobonhlobo yakha omningi. Omunye yezinto ezithakazelisa kakhulu iyona currant Selechenskaya, ukubuyekezwa zazo balimi umane emangalisayo. Kulesi sihloko, ake sixoxe ngalokho ihlukile ikakhulukazi lolu hlobo futhi, yebo, ku-indlela efanele azinakekele.
Etholakale Selechenskaya currant ubekade Bryansk, All-Russian Research Institute lupin. The main izinzuzo izinhlobo:
izithelo esikhulu kakhulu (1.7-3.3 g);
undemanding nenhlabathi Ukwakheka;
ukunambitheka nezimnandi amajikijolo (yokunambitha amaphuzu - 4.7 amaphuzu);
ukumelana frost, nesomiso kanye ongaphakeme amazinga okubanda ebusika;
okuqukethwe okusezingeni eliphezulu lika-vitamin C izithelo;
ukumelana powdery isikhutha.
Currant ehlathini Selechenskoy ikhula kakhulu, compact ngokwanele futhi ngesikhathi esifanayo inikeza amahlumela flat iqonde. Round, shiny amajikijolo omnyama uvuthwe ekuqaleni futhi ngokushesha. Zingasetshenziswa kokubili ukulungiswa izithelo iyisitshulu kanye jam, newayini, utshwala, ayo, jellies, yogurts, ofakwe for loshokoledi nokunye okunjalo. D. Ngaphezu kwalokho, currant Selechenskaya futhi uhluke ngokwanele isivuno high (99 t / ha).
Ibanga balimi lokhu abaningi etshalwa ezweni lethu. Izibuyekezo sakhe baziphatha kahle kakhulu. Zonke balimi abakhula Selechenskuyu, uthi, ngokwesibonelo, iqiniso ukuthi ripens kuneNingizimu nezinye izinhlobo eziningi. Iningi le namanje like currants kanye dessert ezinkulu, izithelo sweet kakhulu. Ezinye usayizi berry ongafinyelela 50-penny uhlamvu lwemali. Kulokhu, udiliza kubo mncane kakhulu. Ngokusho abatshali isiRashiya, isithelo lokhu ezihlukahlukene tastier okuningi kakhulu kunokuningi nezinye izinhlobo currant. Ngakho uma uthanda ukudla amajikijolo fresh elalivela esihlahleni futhi wenze amnandi Vitamin izithelo iziphuzo, qiniseka cabanga ukutshala endaweni yabo isiko enkulu kangako enjengokufa currants Selechenskaya. Uphenyo ukunambitheka izithelo zakhe ezinhle ngempela.
Yaziswa hlobo balimi Russian nezalo ezikwazi ukumelana nezifo. Impuphu akunjalo sithinta cishe neze.
Ukungabi currant grade Selechenskaya has eyodwa kuphela. Naphezu izimangalo we abalimi we ukuzinza, ezihlabayo yayo ngempela kalula sigule of ihlumela ngomnikelo omncane. Ngakho-ke, abalimi kabani izindawo zisengozini enkulu yokuthola lesi sifo, kufanele ucabangele ukutshala izinhlobo Selechenskaya-2. Ukuze uphawu ke uzinzile kakhulu. Amajikijolo ngisho ezinkudlwana. Nokho, ngeshwa, izithelo lokhu ezihlukahlukene akuzona amnandi njengekhekheba elingamazi Selechenskoy evamile. Ngakho kulesi simo, kuyodingeka ukhethe.
Kuboniswa ezihlukahlukene ayethembekile kuyo Bryansk SRI lupin umfuyi Astakhov. Ngenxa cross-zizalela kanye hybrid yisithombo Dove yisithombo Bredtorpa waphenduka currant jikelele amelana powdery isikhutha nezibungu, izithelo esikhulu kakhulu (5 amagremu). Ngokungafani Selechenskoy ezivamile, lokhu ezihlukahlukene kudinga ukunakekelwa okuhle nenhlabathi evundile ngokwanele. Ngesinye ehlathini, uma kwenzeka ukuthi izitshalo kuyo yonke inkathi elinikwe ukunakwa ngokwanele, ungakwazi ukuqoqa kufika ku 2.5 kg amajikijolo.
Kusukela evamile black currant Selechenskaya-2 kuyahluka ezingasho elikhulu ehlathini aluhlaza futhi kancane ukumelana kuya entwasahlobo yesithwathwa.
Njengoba ubona, izinhlobonhlobo muhle kakhulu - ukuhoxa ngokwanele ukumelana isifo hhayi ezingezwakali kakhulu. Indlela efanele ukuze isitshalo currants Selechenskuyu? Lutho ikakhulukazi eziyinkimbinkimbi, le nqubo singamelwe. Beka ehlathini lakhe ngendlela efanayo njengoba yimuphi omunye izinhlobo zokuqala of currants. Kuyefana nasendleleni ukunakekelwa izitshalo.
Fit ukuwa engcono noma ngasekupheleni noma entwasahlobo, ngaphambi ihlumela kuqhuma. Ngu inhlabathi currant Selechenskaya undemanding ngokuphelele. Nokho, ukukhetha indawo enhle indiza kahle inhlabathi, ungathola isivuno esikhulu kakhulu. Kepha Selechenskoy-2, bese salokhu currant inhlabathi kwangaphambilini ngcono - inqubo saziso.
Watshala black currant Selechenskaya kwi okwanele, endaweni hhayi yizikhukhula. Dig ensimini ngaphesheya isiqondiso enyakatho naseningizimu 50 cm imbobo ukujula at ibanga 1.5-2 m kusuka komunye nomunye ngenani nezihlahla.
Hlelela ngamunye kahle yisithombo esitshekile degrees 45, emuva eningizimu, ukuze entanyeni ingezansi eliphansi 15 cm. Yenziwe ngaphambili, inhlabathi ngcono uthele imbobo kanye tamped zemithi. Primer ngoba currant uzilungiselele kanje: okuhle ingadi umhlabathi humus futhi wabashukumisa 100 g futhi ingilazi nitroammophoska umlotha ibhakede ingxube. Kuthatha izakhi currant kusuka ngu-40 cm ukujula. Ngakho-ke, i-ungqimba okuholela amahlathi evundile kwakwanele. I ububanzi we izimbobo Nokho, akufanele kube cm engaphansi kuka-60. Uma kungenjalo, black currant Selechenskaya ngeke usabhekana yokuntuleka umsoco.
Ngemva kokufika iziqu esihlahleni ukuba zamulchirovat. Sami izithombo bafa ukuze uhlala ngenhla phansi 3-4 efihlekile. Ngaphezu kwalokho, ku-isitshalo ngasinye kwakufanele lithululelwe emhlabeni ibhakede lamanzi.
Ukunisela currant kokubili Combs kubhekwe ngesikhathi yokukhula kanye kuphela ngayinye izinsuku ezingu-10. Inani lamanzi kufanele lube sezingeni elingenza phansi ngaphansi sezihlahla ofakwe okungenani 40 cm ejulile.
Ukuze ondle currants Selechenskaya kathathu isizini ngayinye. Ngo-April ngaphambi ihlumela ukuvulwa ngaphansi zonke ehlathini kudingeka uthele ibhakede lamanzi ziyoncibilika ke nge urea (100 g). Phakathi esibelethweni olunzulu, futhi cishe ngo-June, currants kufanele zalisa NPK (150 g 10 amalitha). Ekwindla, ngasekupheleni kuka-October - ekuqaleni kuka November, naphansi kwayo yonke ehlathini kulethwa ibhakede humus kanye umlotha ingilazi.
Njengoba kwenzeka ngeningi nezinye amajikijolo, currant ezihlabayo Selechenskoy ngezikhathi yakha. kwezitshalo Serious ekhiqizwa kuphela eminyakeni yokuqala 4-5. Yenza-ke ngendlela ukuthi lapho ngineminyaka eyisithupha ubudala kwadingeka 4-5 ngonyaka ngamunye, amagatsha kuzo zonke ehlathini. kwezitshalo Landelayo ekhiqizwa omnene kuphela, ekuvuseleleni.
Selechenskaya currant - empeleni enhle kakhulu futhi ngempela kufanele wathola Izibuyekezo ezinhle Russian balimi banga. Ngokunakekela efanele, ungamukela ezithela abalulekile amajikijolo okumnandi. Sikhula kahle endaweni eyodwa ngaphandle kokuba ukushintsha kungaba iminyaka 10-12 currants.
Indlela yokufaka i-plaque ye-bark beetle eludongeni: isinyathelo ngesinyathelo imfundo, izici nezincomo
Ukuhambelana imibala izingubo: kanjani ukubheka angenakuvinjwa ukudala isitayela sakho siqu
Obonisa phezu imisipha pectoral: umsebenzi izici
Tansy - imbali female, okuyinto ephatha amadoda